C/wali Gaas “Waxaa ku baaqayaa in Galmudug arrinteeda iyada loo daayo oo ay heshiiyaan” – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Mas’uuliyiinta sare ee Maamulka Galmudug, isagoo ku baaqay in maamulka loo daayo arrimihiisa, si ay uga heshiiyaan.
C/wali Gaas oo wareysi siiyay Idaacada VOA ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay u maareysay xaalada Galmudug, si aan laga fileyn, isagoo xusay in Galmudug ay tahay maamul cusub oo aan loo baahneyn in shiddo laga abuurin.
“Arrinta xil ka qaadista Galmudug, sida loo maareyo si ka duwan in loo maareeyo ayay aheyd, dadka la isku soo dhoweeyo, waa maamul cusub oo inuu dhismo la rabo, in aan shiddo laga abuurin, laakiin waxaa moodaa si aan ka fiirsi laheyn loogu deg degay”ayuu yiri C/wali Gaas.
Dhinaca kale waxaa uu ka hadlay shirka uu ku baaqay Madaxweynaha Jubbaland ee ka dhacaya Kismaayo, waxaa uu tilmaamay in shirkaas looga tashanayo waxa ay wadaagaan maamul goboleedyada, iyo waxa ka dhaxeeya iyaga iyo dowladda Federaalka.
Khilaafka wadamada Khaliijka ayaa saameyn ku yeeshay nidaamka Federaalka ee Soomaaliya, kaddib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay taageereen Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyagoo ka soo horjeestay mowqifka dhex dhexaadnimo ee dowladda Federaalka qaadatay.